किन देखिएन राडारमा सी चिनफिङको प्लेन ? – Lokpati.com
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राशिफल अमेरिका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मृत्यु नेपाल प्रहरी नेकपा अपराध पक्राउ सरकार केपी शर्मा ओली नेपाली काँग्रेस चितवन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
किन देखिएन राडारमा सी चिनफिङको प्लेन ?
By लाेकपाटी न्यूज On २६ आश्विन २०७६, आईतवार ०६:३८
काठमाडौं। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आएका छन्। २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रप्रमुख नेपाल आएका हुन्। नेपाल आउनु अघि सी भारतको भ्रमणमा थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग चेन्नईमा भेटेर त्यहीँको विमानस्थलबाट एयर चाइनाको विशेष विमान सीए५७ मार्फत् सी नेपाल आएका हुन्। सी नेपाल आउँदा उनीसहित चिनियाँ प्रतिनिधिहरु तीनवटा हवाइ जहाजमा नेपाल आएका छन्।
सुरक्षित उडानका लागि सबै विमानको अवस्था राडारमा ट्रयाक गरेर हेरिन्छ। हरेक एयरपोर्टमा त्यो सिस्टम हुन्छ भने प्रविधिको विकाससँगै घरमै बसेर इन्टरनेटमार्फत् पनि त्यसलाई ट्रयाक गर्न सकिन्छ। विभिन्न वेबसाइटमार्फत् कुन विमानस्थलबाट उडेको कुन विमान कुन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने हो र अहिले कहाँ पुग्यो भनेर इन्टरनेटबाटै पनि हेर्न सकिन्छ।
तर, सी चढेको विमान भने कुनैपनि राडारमा देखिएको थिएन। इन्टरनेटका अनलाइन फ्लाइट ट्रयाकरमा मात्र होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राडारले पनि सी चढेको सीए ५७ विमान ट्रयाक गर्न सकेन।
सी आफ्नो सुरक्षा र गोपनियताको मामलामा धेरै सचेत राष्ट्रप्रमुखमध्येमा पर्छन्। उनी नेपाल आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलका सबै उडान रद्द गरिएको थियो। नेपालको आकाश खाली गरिएको थियो। त्यतिमात्र होइन, उनको उडानको विवरणसमेत गोप्य राखिएको थियो।
कुनैपनि माध्यममा उनको विमानको उडान र अवतरणको समय दिइएको थिइएन। अनलाइनमार्फत् विभिन्न विमानस्थलको उडान र अवतरण सेड्युल हेर्न मिल्ने साइटहरु सबै खालि थिए।
हरेक विमानस्थलको उडान र अवतरणको विवरण दिने फ्लाइटस्टाट्स डटकममा चेन्नई विमानस्थलबाट त्रिभुवन विमानस्थलसम्म जाने फ्लाइटको उल्लेखसमेत थिएन। यस्तै, विमानलाई राडारमार्फत् ट्रयाक गरेर अनलाइनमा त्यसको अवस्थितिको जानकारी दिने वेबसाइट राडार२४ डटकमले समेत सी को विमान ट्रयाक गर्न सकेको थिएन।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार विमानमा राडारमा देखिन वा नदेखिनका लागि एउटा स्विच हुन्छ। यदि त्यो स्विच बन्द गरिएमा सो विमानलाई कुनैपनि राडारले ट्रयाक गर्न मिल्दैन। प्रवक्ता पाण्डेले सीको विमानमा सो स्विच बन्द गरिएकाले कुनैपनि राडारमा नदेखिएको हुनसक्ने बताए।
सी-देउवा भेट : चीनसँग विपीकै पालादेखि हार्दिक सम्वन्ध छ
‘ऋणको डर देखाएर रेलमार्ग रोक्न मिल्दैन’
कार्तिक ४ मा युवा विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्मेलन
‘फोन खुल्यो, तर इन्टरनेट खुलेन’
ओपोको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा, यस्ता छन् विशेषता